Inhlawulo – iAfrika
Ngokwesintu uma wone intombi, wathatha ubuntombi bayo uyahlawula ngenkomo ebizwa ngenkomo kamama, kanti ke noma uyikhulelisile leyontambazane uyahlawula, uhlawulela ukugeza umuzi wakubo njengoba usuke wephule umthetho womuzi okusho ukuthi kumele uwugeze.
Okuba yindida ke kwabaningi ile yokuthi umuntu eseyilobolile ingoduso yakhe kodwa bengakashadi bese iyazithwala, lena iyindida ngoba abanye abanumnzane bayaye bafune inhlawulo ngoba phela indodakazi lena isuke ingakagcagci noma isuke isiyengoduso yomuntu. Lokhu kuyindida kwabaningi ngoba phela naye umkhwenyana lo osuke eselobolile usuke enganalo ulwazi kahle noma kumele yini ahlawule umuzi kamkhwewakhe noma , kanti ke abanye abakuvumi lokho ngoba phela ngokucabanga kwabo basuke sebekwenze konke kwashoda wona ke umgcagco lo osuke usabekelwe usuku noma usahlelelwa. Lokho okwenza kube nzima ukuthi bavume ukuhlawula umuzi.
Umthetho ngokuhlawulwa kwengoduso
Umthetho uthi ke uma inkehli isimumethe isalotsholwa, ukhipha imbuzi okuthiwa igeza izinkomo lezi olobola ngazo ngoba usuke usuzincolisile. Kuyenzeka ke abasekhweni babize inkomo njengenhlawulo, okusuke kuyiphutha lelo njengoba kubizwa imbuzi. Uma ke abasemzini begejile babiza inkomo kuyaye kuthi ngosuku lomgcagco, kuba khona isigcawu la okusuke kubhungwa ngendaba yokuthi kuhambe kanjani ukuhlanganiswa kwemizi emibili la eyakha ubuhlobo. Lapho kusuke kuhlangene abakhongi nemindeni yomibili, ilapho ke abakhongi bomkhwenyana abafike baluneke khona udaba lokuthi umkhwenyana uhlawuliswe inkomo esikhundleni sembuzi ukugeza izinkomo alobole ngazo, okuba ilapho ke abaqhamuka khona nesisombululo sokulungisa iphutha.
Tags Amalobolo, Inhlawulo
2 thoughts on “Inhlawulo”
Sawubona umbuzo wami uthi, njengoba umama nobaba wami bashada ngisaseswini sika mama, ngabe ngiyingane yasemshadwen noma angiyona? uMama wangikhulelwa bengakagcagci benoBaba kodwa ngibiza isbongo sikaBaba, cela ungichazela kabanzi. Ngiyabonga.
Cofa lapha ukuthola impendulo Ukuhlawulela ingane